युद्दलडेर पेरिसडाँडालाई सत्ता थमाएका क. पर्वत मृत्युसँग जुद्दै भन्छन: ‘आत्मदाह गरु झैँ लाग्छ’ « Postpati – News For All
युद्दलडेर पेरिसडाँडालाई सत्ता थमाएका क. पर्वत मृत्युसँग जुद्दै भन्छन: ‘आत्मदाह गरु झैँ लाग्छ’
भुल्नै नसकिने पर्वतका केहि क्षणहरू
पञ्चराम अर्थात पर्वतका भुल्नै नसकिने क्षणह थुप्रै छन । उनि भन्छन धेरै ठाँउ पात पातमा बाँचीयो । बाँचेका पलहरूको कल्पना समेत गर्न सक्दिन । केहि घटनाहरूले उनलाई अहिलेपनि झकझक्याई रहन्छन । उनि बेला बेला झसङ्ग हुन्छन । भन्छन ती घटना सम्झदा पनि बेग्लै मजा आउछ । तर इतिहाँस त आखिर इतिहाँस नै हो । भुलेर पनि भुल्न सकिन्न । उनले त्यसलाई जिवनको नयाँ आयामका रूपमा लिएका छन ।
साथीहरूः मुडकेजिउला गाँउपालिका अध्यक्ष दत्त साही र वडा अध्यक्ष भानुभक्त बाेहरा, अनुराग, जस्ले पर्वतकाे उपचारकाे लागि पहल थालिरहेका छन ।
उनको कलाकार टिममा करीब देशैभरीका युवा युबतीह?को जमघट थियो । त्यही टिममा मुख्य गायीकाको ?पमा काम गर्ने डोल्पाकी सरिता बोहोरा थिइन । उनि सरितालाई बहुत मन पराउथे । तर भन्न सकिरहेका थिएनन । सरितालाई जनमुक्ती सेनाहरूले खुब प्रस्ताव गर्थे तर उनि त्यस्तो लप्पन छप्पन तिर लाग्दैनथिइन ।उनि भन्छन बेग्लै स्वभावकी सरीता अरू भन्दा फरक थिइन । लगनशिल र मेहनती स्वभावकी उनि निक्कै संघर्षशिल थिइन । कुनै पनि कुरामा हरेस नखाने सरितको रूप पनि त्यतीकै राम्रो थियो । उनलाई रूप र गुण दुबै मिलेको एकमात्र केटी लाग्थ्यो सरिता उनले सरीतासंग प्रस्ताब राखे सहजै स्वीकारीन उनिहरूको लामो प्रेम पछि युद्धमै बिहे भयो ।
नेताह? प्रतिको बितृष्णा
पर्वतको स्वास्थ्य अबस्था नाजुक छ । उनलाई मुटु रोग लागेको छ । गोजीमा उपचार गर्ने पैसो छैन । घर परिबारले गर्न सक्ने अबस्था छैन । उपचार नपाएर भौतारीरहेका उनलाई क्रान्तिको चिन्ता भने आफनो शरीर भन्दा अधिक छ । उनको मनमा लागिरन्छन यो अधुरो त्रान्तिलाई पुरा कस्ले गर्ला तर अबस्था त्यस्तो देख्दैनन । नेताहरूको कुर्सी र सत्ता मोहले शहिदका सपनाहरू शाकार नहुने हुन की भन्ने चिन्ता छ । माओबादीहरूको टुटफुट देखि आक्रान्त उनि क्रान्तिको लागि एकता हुनुको बिकल्प नभएको बताउछन ।
१४ भाद्र २०७४, बुधबार को दिन प्रकाशित